हिरासतभित्र कपडाले मुख थुनेर शम्भुको हत्या, आमालाई सुई लगाएर बेहोस ! — Motivatenews.Com
हिरासतभित्र कपडाले मुख थुनेर शम्भुको हत्या, आमालाई सुई लगाएर बेहोस !
जनकपुरधाम – धनुषाको सबैला नगरपालिका १२ बरकुवाका शम्भु सदा प्रहरी हिरासतमा मृत भेटिएका छन । साहलाई प्रहरीले कपडाले मुख छोपेर हत्या गरेको आफन्तले आरोप लगाएका छन ।
स्थानिय संजय साहको ट्याक्टर चलाउँदै आएको उनी जेठ १२ गते सवारी दुर्घटनाको केसमा पक्राउ परेका थिए । माटो लोड गरेर गाउँतर्फ फर्किने क्रममा एक जना महिलालाई उनले चलाएको ट्याक्टरले ठक्कर दिएको थियो । उनको अस्पताल लैजादै गर्दा मृत्यु भएको थियो । घटनापश्चात प्रहरीको सम्पर्कमा गएका उनको मंगलबार राति प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको हो ।
उनी मंगलबार राति इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाको थुनुवा कक्षभित्र झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए । प्रहरीले उनले आत्महत्या गरेको बताएको छ । उनका परिवारका सदस्य र स्थानीयवासी भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनीहरुको एउटै भनाइ छ, ‘उनको हत्या भएको हो र घटनाको छानबिन हुनुपर्दछ ।’
यता नेकपा नेता एवं पूर्वमन्त्री उमेश यादव प्रहरी हिरासतभित्र शम्भु सदाको मृत्यु भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘उनको हत्या या आत्महत्या के भएको हो ? प्रहरीको निगरानीमा रहेको व्यक्ति झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिनु रहस्यमय छ,’ उनले भने, ‘गम्भीर छानबिन होस्, घटनालाई सामान्य ढंगले नलिइयोस् ।’
२०७७ जेठ २९ गते प्रकाशित
भेन्टिलटरमा उपचारत २१ वर्षीया किशोरीलाई बलत्कार